Habka tacliinta iskuullada dalka oo looga deeyriyey cilmibaaris caalami ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Habka tacliinta iskuullada dalka oo looga deeyriyey cilmibaaris caalami ah
Baahidu waxay salka ku haysaa bareyaal xirfad leh
La daabacay tisdag 2 april 2013 kl 13.40
Sida uu qoray war-geeyska maalinlaha ee Dagens Nyheter in cilmi-baaris caalami ah oo laga sameeyey nidaamka tacliinta ee iskuullaadka dalkan lagu sheegey inuu yahay mid aan wanaagsanayn ama halis ku ah ardeyda. Hase yeeshee, sida ay sheegtay hogaamiyaha ururka daladda macallimmiinta Eva-lis Sirén in cilmi-baaristu intaa ka ballaaran tahay iyo in aannu jirin macaalin isticmaala hab keliya ee tacliineed xiisadaha uu ardeyda wax barayo.
Macallimmiinta ayey ka fajicisey in laga bixiyo sawir noocaas ah iyo iney isticmaalaan hab qura. Bareyaashu waxey isticmaalaan habab kala duwan ee ku saleeysan baahida ardeyda. Waa mid ey macallimmiintu baahi u qabaan iney noocyo kala duwan isticmaalaan inta iminka wax ka badan. Waxaa sidoo kale loo baahan yahey cilmi-baarisyo markhaati u noqda hoowlaha lagu guuleeystey iyo kuwa aan lagu guuleeysan ee habka tacliinta iskuulaadka Iswiidhen.
War-geeyska DN ayaa maanta daabacay in habkii tacliinta ee labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey aanu noqon mid natiijo wanaag-san laga gaaro, sida ku cad cilmi-baaris caalami ah ee lagu sameeyey ardey tiradoodu gaarsiisan yihiin 80 malyuun. Cilmi-baaristaa ayuu isku shaandheeyn ku sameeyey caalinka John Hattie oo ka howl-gala dalka Niyuusiland, iyadoo la isu barbar-dhigey habka tacliinta ee lagu guuleeysto iyo midka lagu guul-darreeysto, oo sida cilmi-baaristani qabto uu habka iskuulaadka ee dalkan wax lagu baro dhallaanka dhigta iskuulladu yahay mid aan lahayn natiijo wanaagsan. Waxaa ka mid ah habka ah in lagu howl-galo xallinta mashaakilaad iyo howl-guriyeedka ardeyda la siiyo. Hase yeeshee hogaamiyaha ururka daladda macallimmiinta Eva-lis Sirén ay qabto in fikirkaasi yahay mid la sahladey salkana ku haya baahida loo qabo macallimmiin howlahooda xirfad u leh:
- Waa inaan caddeeynaa in arrimmaha uu John Hattie uu carrabka ku adkeeyay uu ka mid yahay baahida loo qabo macallimmiin xirfaddooda aqoon u leh. Waxaan sidoo kale jirin hab keliya ee dhallaanka wax loo baro, hase yeeshee ey jiraan bareyaal xirfad u leh hoowlahooda ee ku howl-gala habab kala duwan. Waa midda ugu muhiimsan, sida ay sheegtay.
Ma ku qanac-san tahay habka tacliinta iskuullada dalka?